Madaxweyne Xasan Sh “Waxan ka baqeyna in Shabaab ay ku laabtaan Kismaayo” – SBC
Madaxweyne Xasan Sh “Waxan ka baqeyna in Shabaab ay ku laabtaan Kismaayo”
Madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markale ku celiyay rabitaanka dowladiisa ee ku aadan maamul mideysan oo loosameeyo gobolada Jubooyinka iyo gedo xili uu ka hadlayay kulan saxaafadeed ka dib markii uu ka soo degay garoonka diyaaraha Muqdisho.
Waxa uu Sheegay Dr Xasan Sheekh Maxamuud in sababaha dowladu xooga u saartay arimaha Jubooyinka ay tahay oo keliya doonitaanka in dadka gobolkaas ka soo jeeda ay si mideysan isugu yimaadaan wadatasho uu ka dhasho maamul mideysan oo lagu kalsoonyahay.
Baqdinta ugu weyn ee dowladiisu qabto ayuu ku tilmaamay Xasan Sheekh in ay tahay dib ugu laabashada is qabqabsi, colaado, dagaalo sokeeye iyo weliba in ay dib ugu laabtaan Xoogagii xarakada Alshabaab ee ka baxay kal hore magaalada Kismaayo
“Waxaanan jecleen in aan maqalno waa in colaada ay dib ugu soo noqoto goboladaas, taas oo fursan siinkarta in Alshabaab ay dib ugu soo noqdaan goboladaas” waxaa sidaasi yiri Madaxweynaha SOomaaliya.
Waxaa kale oo uu u jeediyay Shacabka gobolada jubooyinka in ay ku kalsoonaadaan dowladooda ayna dhamaatay xiliyadii Soomaaliya laga maamuli jiray dalka dibadiisa iminkana ay tahay dowlad buuxda oo go’aan rasmi ah gaari karta.
Wafdiga Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa maanta waxa ay dib ugu soo laabteen magaalada Muqdisho xarunta dalka isagoo ka yimid dhanka iyo magaalada Adis ababa xarunta dalka Itoobiya halkaas oo todobaadkii ugu dambeeyay ay ka soconayeen dabaal degyo quseeya 50sano guuradii Africa iyo kulamo kale oo xaalada Soomaaliya loogaga hadlayo.